Tuchel Oo Filayo Inuu Chelsea Keeno Xidig Diirada U Saaran Kooxaha Manchester City Iyo Liverpool
Home Horyaalka Germalka Tuchel oo filayo inuu Chelsea keeno Xidig diirada u saaran Kooxaha Manchester...
Imaatinka Thomas Tuchel oo ah maamule cusub ayaa lagu soo waramayaa inay Chelsea ku ridi karto booska hogaaminta si ay u dhameystirto saxiixa daafaca dhexe ee RB Leipzig Dayot Upamecano.
Da’yarka heerka caalami ee reer France ayaa sifiican uga soo muuqday Bundesliga mudooyinkii ugu dambeeyay, waxaana hubaal ah inuu ku raaxeysan doono xirfad heer sare ah hadii uu ku sii socdo horumarkan.
The Guardian ayaa horay ula xiriirisay kooxo sida Manchester United iyo Liverpool, wararkii ugu dambeeyay ee Sport Bild ayaa sheegaya in magacaabista Tuchel ee tababaraha Chelsea ay haatan ka hormarin karto kooxaha kale ee doonaya saxiixiisa.
Warbixinta ayaa sharraxday in Tuchel uu muddo dheer la dhacsanaa Upamecano, isagoo bartilmaameedsaday markii uu hoggaaminayay Paris Saint-Germain. Waxaa sidoo kale la xusay in Tuchel uu ku hadlo luuqada Faransiiska si wanaagsan iyo in Upamecano sidoo kale laga yaabo inuu ku laabto inuu kula midoobo saaxiibkiisii ​​hore ee Leipzig Timo Werner Stamford Bridge.
Ugu dambeyntiina, Sport Bild ayaa intaas ku dareysa in taageerada dhaqaale ee xoogan ee ay Chelsea ka heysato Roman Abramovich ay siin karto fursad dhab ah oo ay 22-jirkan kula soo wareegaan ka hor kooxaha sida weyn u jecel ee Bayern Munich, iyadoo ciyaaryahanka lagu wado in lagu burburin karo 38 milyan oo ginni marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. wuxuu furmaa xagaaga.
Tani waxay dhabar jab weyn ku noqon kartaa Man Utd iyo Liverpool, oo labaduba sidoo kale si deg deg ah ugu baahan inay ku xoojiyaan daafaca dhexe.
Previous articleSupercomputer oo Saadaal ka bixiyay Labada Koox ee tagaya Finalka Champions League iyo Kooxda Qaadeysa
Next articleReal Madrid oo kula tartameysa Man United & Chelsea labada xiddig ee lagu qiimeeyo € 200m si ay uga dhigto bedelka Mbappe